Wararkii ugu dambeeyey caleema saarka Axmed Madoobe
Qaban qaabadii ugu dambeysay ee munaasabadda caleema saarka, Axmed Madoobe ayaa saaka ka socota magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, taas oo la filayo inay dhacdo saacadaha soo socda ee maanta.
Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo xoojiyey, iyadoona ciidamo dheeraad ah lagu soo daadiyey waddooyinka magaaladaasi.
Xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland oo labo jeer dib u dhacday ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxweynayaashii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, hoggaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdisharkuur, Madaxweynayaashii hore ee maamullada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, Shariif Xasan, iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, Senatoro iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa munaasabadda ka qeyb galaya wafdi ka socda Jabuuti, Kenya, Itoobiya iyo Somaliland, sida uu shaaciyey wasiirka warfaafinta Jubbaland.
Dowladda Soomaaliya oo si weyn uga soo horjeeda doorashadii dib loogu doortay Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa xalay ku dhawaaqday in markale ay xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha tooska ah ee ka dagaya garoonka diyaarada magaalada Kismaayo.
Tallaabadan ayaa uga sii dareysa khilaafka labada dhinac, iyadoona inta badan xubnaha mucaaradka ay arrintan si weyn ugu dhaleeceeyeen madaxda sare ee dalka.